ओलानी : पानी बिनाकी चुरेकी रानी « Anumodan National Daily
ओलानी : पानी बिनाकी चुरेकी रानी
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०६:१४
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १२, ओलानीमा बस्दै आएका चन्द्रसिंह बडैला गाउँलेहरू भटाभट बसाई सर्न थालेपछि चिन्तित छन् । ५१ वर्ष अघि डोटीबाट उनको परिवार यहाँ आएको हो । अब उनीहरू एउटै पुस्तामा दोस्रो बसाइसराईका लागि तयार छन् । भन्छन्, “हेर्दाहेर्दै धेरै जनाले ओलानी छाडेर गए, कतिपय जाँदैछन् ।”
चन्द्रसिंह सहित दुई सय जनाले चुरेको ओलानीमा जंगल फााडेरै बस्ती बसालेका थिए । त्यो समय पहाडतिर भोकमरी लाग्यो । हाट जाने बेला उनीहरू ओलानी कै बाटो ओहोरदोहोर गर्दथे । भोकमरीले च्यापेका उनीहरूलाई मछेली खोलाको पानी र यहाँको चरिचरन क्षेत्रले मोहित पारेको थियो । तर, त्यो आकर्षण अब बाँकी छैन । पानी नभएकोले अब बाँकी जिन्दगानी यहाँ चल्न गाह्रो हुने निस्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका १२ ओलानीमा धारा छ, पानी छैन ।
उहिले मछेली खोलामा सिंचाईं र पिउनका छेलोखेलो पानी थियो । गोदावरी वडा नम्बर १२ का ८२ वर्षीय उदयसिंह बडैला भन्छन्– “अहिले खानेपानीको हाहाकार छ । पानीका स्रोत सुकेपछि स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत व्यापक असर परेको छ । पानी नहुँदा बालीनाली पनि प्रभावित छ । मछेली खोलामा गेग्रान भरिएर भएको पानी पनि भित्रभित्रै बगेर जानथालेको छ ।”
चुरे फेदीमा बस्ती बसाउँदा डा. केआई सिंहले भनेका कुरा सम्झिदै उनी भन्छन्– “चुरे पहाडको फेदीमा नबस, अरू ठाउँमा म जग्गाको व्यवस्था गरिदिन्छु, भविष्यमा तिमीहरूलाई पानीको संकट पर्नेछ ।” चन्द्रसिंह उतिबेला डाक्टर केआई सिंहले आफूहरूलाई भनेका कुरा अहिले सत्य भएको बताउँछन् । भन्छन्– “आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्नेहरू बसाई सरिसके । कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारहरू विषम अवस्थासंग जुध्दै यहीँ बस्न बाध्य छन् ।”
खानेपानी नै नपाइने ओलानीको जग्गा कसैले किन्दैन । गोदावरी वडा नम्बर ११ र १२ मा बस्नेहरूसित धेरै जमिन छैन । जंगल फाडेर बस्ती बसेकाले प्रतिपरिवार ५ कठ्ठादेखि डेढ बिघासम्म जमिन रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
ओलानीबासी अहिले खोलाको धमिलो पानी पिउँछन् । प्रदूषित पानीका कारण विभिन्न रोग लाग्ने गरेको मालाखेती स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव सत्यराज फुलारा बताउँछन् । उनका अनुसार दूषित पानीका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड, छालासम्बन्धि लुतो, खटिराका बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेका छन् ।
उदयसिंह भन्छन्– “अब त ओलानीमा कसैले छोरीबेटी पनि दिन मान्दैनन् ।” उनीहरूलाई छोराको विहे गर्न ओलानीभन्दा बाहिर पनि घर छ भन्नुपर्ने भएको छ । गोदावरी वडा नम्बर ११ र १२ मा धेरै व्यक्तिको दोहोरो बस्ती छ । केटाकेटी पढाउन र सेवासुविधाका हिसाबले धेरैले अत्तरिया बजार, धनगढी र राजमार्ग छेउछाउमा घर बनाएर बस्न थालेका छन् ।
गोदावरीको चुरे फेदीका बस्ती वर्षौदेखि तिर्खाएको छ । सुख्खायाममा मूलहरू सुकेका बेला यहाँका बासिन्दाको कठिन दिन सुरु हुन्छ । एक घैंटो पानीका लागि २/३ घण्टा पैदल । गोदावरीको सबै वडामा खानेपानीको अभाव छ । पानीको हाहाकार हुने गोदावरीका ४, ६, ७, १०, ११, र १२ नम्बर वडा चुरे फेदीमा पर्छन् । ती वडामा खानेपानीका मूल पछिल्ला वर्षमा सुक्दै गएकोले स्थानीयहरू पनि त्यहाँबाट बाहिरिदैछन् ।
गोदावरी वडा नम्बर ११ ओलानीका तुलाराम बडैला दुई वर्षअघि गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ चौकीडाँडामा बस्दै आएका छन् । पानी नहुँदा ३० वर्षदेखि बस्दै आएको घर छोडेर खडकसिंह बडैला पनि चौकीडाँडा सरे । सात वर्षदेखि ओलानीमा बस्दै आएका लालवीर कोली दुई महिना अघि बसाइसराई गरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ गेटामा आएका छन् । अन्नबालीले वर्षभर खान नपुगेपछि डोटीबाटै बसाइसराई गरी ओलानी आएका साउँद र कडायत परिवार अत्तरिया नजिक बसेका छन् ।
तुलाराम, खडकसिंह र लालवीर प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गोदावरी ११ र १२ बाट गोदावरी कै अत्तरिया, चौकीडाडा, झन्झटपुर, धनगढी आदि ठाउँमा घर बनाएर बस्नेको संख्या धेरै भएको गोदावरी वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष शिव विक बताउँछन् । गाउँमा बनाएका घर र जमिन कति बाँझा छन् त्यसैबाट बसाइसराईको तथ्यांक आउने उनी बताउँछन् ।
चुरेको फेदमै रहेको बस्तीमा असार अन्तिमसम्म बााझो रहेको जमिन । तस्बिरहरु : मीन ठकुरी
ओलानीबाट बस्ती सार्नेमध्ये थोरैले मात्र बसाइसराई सम्बन्धी कागजात बनाएको पाइन्छ । यसले गर्दा रेकर्डमा उनीहरू बसाई सरेका छैनन्, तर वास्तविकता भिन्नै छ । गोदावरी वडा नम्बर ११ र १२ बाट सात महिनायता ३५ जनाले बसाइसराई गरेका छन् । नगरपालिकाको पञ्जिकरण शाखाका गोविन्दराज जोशीका अनुसार आउनेभन्दा बसाइसराई गर्नेको क्रम बढी देखिन्छ ।
वडाध्यक्ष विकका अनुसार २०६८ सालको जनगणना अनुसार वडा नम्बर ११ मा नौ सय ९१ र वडा नम्बर १२ मा एक हजार छ घरधुरी छन् । तीमध्ये अधिकांस दलित परिवार छन् । परिवारका प्राय: सबै रोजगारीका लागि भारत गएका छन् ।
ओलानीमा “पानी दिने विश्वास जसले दिलाउँछ, उही चुनाव जित्छ ।” तर पनि यहाँका बासिन्दाले जहिलेसुकै पानीकै माग गरिरहेकै हुन्छन् । चुनावका बेला पनि उनीहरूले थुप्रै आश्वासन पाएको बताए । तर त्यो दिन उनीहरूको जीवनमा आउने ? थाहा छैन ।
“स्थानीय सरकार बनेपछि जनताका समस्या सम्बोधन हुनेमा बढी आशावादी थियौं” गोदावरी ११ का पठानसिंह विकले भने– “जनप्रतिनिधिले ल्याएको पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत खानेपानीका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएन । सबैलाई पुग्ने गरी पानीको व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीयको अनुहारमा खुसी छाउथ्यो, वर्षाैंदेखिको पानीको समस्या टथ्र्यो र बसाइसर्ने क्रम रोकिन्थ्यो” विकले भने ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनी यो वर्ष खानेपानी आयोजनातर्फ पूरै नगरपालिकाका लागि ६० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट रहेको बताउँछन् । तर, सडक, कल्भर्ट आदि निर्माण कार्य नगरको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । अर्को वर्ष खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने मरासिनी बताउँछन् । नगरले आफ्नो बजेटमध्ये ६० लाख रुपैयाँ डिप बोरिङ र कुवा मर्मतका लागि छुट्टाइएको छ । जसअन्तर्गत वडा नम्बर ४, ६, ७ र १२ मा पर्ने चार ठाउँमा डिप बोरिङ गरिने छ । एउटा डिप बोरिङको लागत १० देखि १५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको मरासिनीले बताए । बाँकी रकम परम्परागत कुवाहरूको मर्मत–सम्भार र अन्य सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्चिने अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनीले बताए । पानी अभावमा छट्पटिएको ओलानीमा डिप ट्यूबेल जडान गर्दा २४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान छ ।
इनारमा बर्सेनि पानी सुक्दै गएकाले यस क्षेत्रमा खानेपानीको ठूलो योजना आवश्यक रहेको गोदावरी गाविसका पूर्व अध्यक्ष भानसिंह विकले बताए । “चुरे वन विनास, जलवायु परिवर्तन र मानवीय गतिविधिका कारणले पानीका स्रोत सुक्न थाले” उनले भने– “खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि चुरे गाउँपालिका र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठूलीगाडको पानीलाई सुरुङ मार्ग खनेर ल्याउन सक्नुपर्छ ।”
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनगढीले गोदावरी नगरपालिका चुरेफेदीको बस्ती ओलानीमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि गत वर्ष दुई वटा डिप ट्यूवबेल निर्माण गरे पनि नियमित खानेपानी आउँदैन । दुई वटा डिप ट्यूबेल मार्फत २१ धारा जडान गरिएको डिभिजन प्रमुख नारायणप्रसाद काफ्ले बताउँछन् । खानेपानीको चरम अभाव देखिए पनि समस्या लिएर कार्यालय कोही नआएको डिभिजन प्रमुख काफ्लेको भनाई छ ।
ओलानीमा डिप ट्यूबेल गाड्दा तीन सय फिटमा पानी आउँछ, तर विद्युत आपूर्तिमा अनिश्चितता हुँदा त्यहाँका उपभोक्ताले नियमित खानेपानीको जोहो गर्नसकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गोदावरी १० र ११ मा नयाँ योजना सर्भे गर्ने तयारी रहेको डिभिजन प्रमुख काफ्लेले बताए ।
भूमिगत जलस्रोत विज्ञ नवराज श्रेष्ठका अनुसार चुरेफेदीको समथर फाँटमा पानी तल प्रशस्त रहेकोले पानी निकाल्न मिल्छ । चुरेफेदीमा छिद्र धेरै हुने हुँदा वर्षातको पानी रसिएर तल बस्छ । त्यही पानीलाई डिप ट्यूबेलमार्फत निकालेर पानीको प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जलस्रोत विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् । विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर ठाउँठाउँमा ट्रान्समिटर राखेर विद्युत आपूर्तिलाई निरन्तरता दिँदै डिप ट्यूबेलमार्फत पानी वितरण गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
विज्ञहरू यसरी पानी संकट आइपर्नुमा चुरे क्षेत्रको भूगोल र त्यहाँ भइरहेको अनियन्त्रित विकासलाई जिम्मेवार ठान्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ भुगर्भविद् डाक्टर सुबोध ढकालका अनुसार अति नै कमजोर र सुक्ष्म माटोका कणहरूबाट बनेका मडस्टोन, बालुवाबाट बनेका स्यान्डस्टोन र विभिन्न आकारका ग्रेभेलहरूबाट बनेका कोंग्लोमेरेट जस्ता चट्टानहरू चुरे क्षेत्रको भू–गर्भको मुख्य संरचना हो । उनका अनुसार अहिले चुरे क्षेत्रमा पनि विभिन्न विकास निर्माण र पूर्वधार विकासका काम भइरहेकाले सडक निर्माण प्रक्रियाले चट्टान टुक्रिने, खिइने र भू–क्षेय हुने प्रक्रिया झन् बढेर गएको छ । चुरे क्षेत्रको चट्टानी भिरमा खनिएका सडक मार्गका अनेक ठाउँमा पहिरो र भू–क्षयको समस्या विकराल छ । वनजंगल फडानी र ती स्थानहरूमा गरिएका अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक बस्तीका कारण पानीका स्रोत सुक्ने गरेको भू–गर्भविद् डाक्टर ढकालको भनाइ छ ।
प्राकृतिक वातावरण, जैविक विविधता चुरेको महत्त्व भएको बताउँदै डाक्टर ढकाल भन्छन्– “पानीको स्रोत नै चुरे भएकोले संरक्षण जरुरी छ । चुरे अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बसाउने चलन, वन फडानी तथा जथाभावी खोलाहरूमा अतिक्रमण अनि चट्टानी भिरहरूबाट र खोलाहरूबाट जथाभावी ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने चलनले चुरेमाथि प्रहार भइरहेको भूमिगत जलस्रोत विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् ।” अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक रूपमा यसरी भइरहेको बालुवा गिट्टी दोहनलाई तुरुन्तै रोकी यसलाई वैज्ञानिक ढंगबाट चलाउन सकिएमा चुरे विनाशलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
चुरे क्षेत्र भावर र तराईको लागि पानीको महत्त्वपूर्ण “रिचार्ज जोन” को रूपमा रहेको छ । चुरेको पहिरो र भू–क्षयको कारणले चुरेबाट बग्ने खोलाहरू अनियन्त्रित भएर बग्ने र बाढीको थप समस्या निम्त्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । चुर विज्ञ डाक्टर दिनेश भुजु चुरेको महत्त्व बताउँदै भन्छन्– “चुरे नेपालमा खण्डित नभएको पर्वतमाला हो र यसले नेपालको समथर तराई र पहाडलाई जोडेको छ ।” चुरे जैविक विविधताको वासस्थान भएको चर्चा गर्दै उनले भने– “आदिकालका वनस्पति साइकस, रुख उन्यू, रामाकेतिक लगायत अन्य थुप्रै जन्तुजनावर आदिम मानवप्रजातिका अवशेष चुरेमै पाइन्छन् ।” चुरेको महत्त्वबारे थप जानकारी दिँदै भुजु भन्छन्– “नेपालका लोपोन्मुख जाति राउटे, चेपाङ पनि चुरेमै आश्रित रहेका छन् । तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण चुरे क्षेत्र ‘पानी बिनाकी रानी’ बनेको छ ।”
भावर क्षेत्रमा ग्राभेल प्रकारको माटो भएकोले पानी छिरेर तल पुग्छ । चुरेको तटीय क्षेत्रमा पानी अड्किने ठाउँ नहुँदा पानी अभाव देखिने डाक्टर ढकालको भनाइ छ । आकाशे पानी जमिनमुनि छिर्न नपाएर भूमिगत जलमा पनि प्रतिकुल प्रभाव पर्दैछ । पानीको बचावटका लागि पनि भू–क्षय नियन्त्रण र वन जोगाउनु जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । चुरेमा रहेका ताल तलैयाहरूको सरक्षण गर्न सके पानी संकटबाट बच्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।
चुरेको प्राकृतिक बनोट पानी नअड्किने हो । पानी नअड्किनु चुरेको दोष नभई प्राकृतिक कारण भएको डाक्टर भुजुको भनाइ छ । उनी भन्छन्– “चुरेलाई प्राकृतिक अवस्थामा छाडिदिने, मानववस्ती नराख्ने हो भने चुरे संरक्षण गर्नुपर्दैन आफै संरक्षण भइहाल्छ ।” चुरेमा गेग्रान, बलौटे बालुवाबाट बनेकोले पानी थामिदैन, त्यही पानी चुहिएर भूमिभित्र जान्छ । त्यही पानी तराईलाई उपलब्ध हुने चुरेविज्ञ भुजुले बताए । चुरे नभए तराईलाई खानेपानी उपलब्ध नहुने भएकोले त्यसको संरक्षण गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
दुई पटक विफल सिंचाईं आयोजना तेस्रो पटक बन्दै
ओलानीमा सिंचार्इं आयोजना सरकारको लागि भारी पर्न गएको छ । दुई पटक यहाँको सिंचाईं आयोजना विफल भयो । २०४२ सालमा मछेली खोलामा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बाँध निर्माण सम्पन्न भयो । त्यो बाँध २०४६ सालमा बाढीले भत्कायो । २०५८ सालमा तीन करोड रुपैयाँ लागतमा पुन: अर्को बाँध बन्यो, तर तीन महिना पनि टिकेन । यी बाँधका लागि हालसम्म १३ करोड बढी रकम खर्च भयो, तर पनि सिंचाईको कार्य पुरा भएन । बाँध भत्किएपछि स्थानीयले स्याउलाले थुनेर केही भागमा सिंचाई गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, यसबाट आउने पानीबाट करिब २० प्रतिशत भागमा पनि सिंचाई सुविधा पुग्न सकेको छैन । हिउँदमा खोलामा पानी कम हुँदा सिंचाईंको सुविधा हुँदैन ।
मोहना सिंचाई अन्तर्गत मछली खोलादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म १३ किलोमिटर लामो नहर भए पनि खोलामा पानी बढी हुने वर्षायाममा पनि पाँच किलोमिटरसम्म मात्र पानी पुग्ने गरेको छ ।
मछली खोलामा मोहना सिंचाई आयोजनाको काम निर्माणाधीन काममा पनि बजेट कमि भएकोले निर्माण कार्य सुस्त भएको क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय धनगढीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गणेश मरासिनीले बताए । “गत असारमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौता हो, तर बजेट अभावलगायत कारणले आयोजनाको अवधि लम्बिएको हो” उनले २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लागतमा यो कार्य भइरहेको बताए ।
आयोजनाले कैलाली र कञ्चनपुरको उर्वर तीन हजार तीन सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । कैलालीका साविकका गोदावरी र मालाखेती गाविसको एक हजार आठ सय र कञ्चनपुरको कृष्णपुर गाविसको एक हजार पाँच सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको इन्जिनियर मरासिनीले बताए ।
आयोजना निर्माणले सिंचाई सुविधा विस्तार भएपछि हिउदे तथा वर्षे बालीको उत्पादकत्व वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअघि दुई पटक निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना असफल भएपछि एकै ठाउँमा तेस्रो पटक आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यो आयोजना पनि दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्छ भन्ने विश्वास स्थानीयलाई छैन । वर्षेयाममा चुरे पहाडबाट बगेर आउने ढुंगा, बालुवा र गेग्रान भरिएर बांध भत्काउने डर स्थानीयवासीको छ ।